ပေးစာများ(letters) – Everybody Read TChen
Posted on December 19, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ပေးစာများ(letters)1 Comment on ချစ်ရတဲ့ ကလိုကလူ လေးရေ
Jimmy ဆီကနေ ပုံကိုယူပါတယ်ကွယ်
တချိန်က တို့လဲမင်းလိုပဲ ခေါင်းကိုမော့ပြီး သစ်ပင်ပေါ်က သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်တဲ့အရွက် စိမ်းစိမ်းလေးတွေကိုကြည့်ရုံ မိုးပေါ်က ပြေးဖြတ်သွားတဲ့ တိမ်ထု ဖြူဖြူလေးတွေကိုမြင်ရုံနဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုခံစားလို့ရခဲ့ဖူးတာပေါ့။
တချိန်တုံးက တို့လဲ သစ်ပင်အောက်မှာတိတ်တိတ်ကလေး ရပ်ပြီး လေကဆော့ကစားလို့ သစ်ရွက်လေးတွေရဲ့ ခိုးခိုးခစ်ခစ် ရယ်သံ ကိုနားထောင်ရင်း၊ ငှက်ကလေးတွေ ကျီကျီတျာတျာနဲ့ သီချင်းဆိုတာ ကိုနားထောင်ရင်း ကျေနပ်တတ်ခဲ့ဖူးတယ်။
မနေ့က ပန်းခြံထဲမှာ တို့ မင်းကိုအတုယူပြီး ငှက်ကလေးတွေသီချင်းဆိုတာ၊ လေတိုက်လို့ သစ်ရွက်မြည်တာ၊ သစ်ရွက်ကလေးတွေကခုန်တာ၊ တိမ်ဆုတ်ကလေးတွေဖြတ်ပြေးတာ စောင့်ကြည့်မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မင်းအရွယ်တုံးက တို့ခံစားခဲ့ရဖူးတဲ့ ခံစားချက်မျိုးတွေ ကိုပြန်မရတော့ပဲ ပျင်းရိငြီးငွေ့ခြင်းနဲ့ စိတ်ပျက်စရာကောင်းခြင်း၊ ထွက်ပေါက်မဲ့ခြင်း စတဲ့ ခံစားချက်မျိုးကိုပဲရတော့တယ်လေ။
တို့လဲ မွန်းကျပ်သလိုခံစားလာရတာနဲ့ ပန်းခြံထဲကထွက်ပြီး အနားမှာရှိတဲ့ အဆင့်မြင့် စားသောက်ဆိုင်တခုထဲဝင်ပြီး ဈေးကြီးပေ့ ဆိုတဲ့ အစားအသောက်တွေမှာစားတယ်လေ။ ဝိုင်တောင် သောက်လိုက်သေး။ နောက်တော့ တို့ စိတ်မရှည်မှုတွေနဲ့ ဆိုင်ကို ခရုဆီဆောစ့် က မလတ်ဘူး၊ အမဲသား ကင်က တို့လိုချင်တဲ့ အတိုင်းအတာ နဲ့မဟုတ်ဘူး ကျက်လွန်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့ ကွန်ပလိမ်းတက်တယ်။ အမှန်တော့ တို့ က ဆိုင်အပေါ်မှာ “စားသုံးသူရဲ့ကအမြဲမှန်တယ်ဆိုတဲ့ အခွင့်အရေး” ကိုအပြည့်အဝယူပြီး တို့ရဲ့ မကျေနပ် ချက်တွေ ကိုဖောက်ထုတ်နေတာပါ။ တို့ရဲ့ မွန်းကျပ်နေတဲ့ အတွေးတွေ စိတ်ညစ်ညူးမှုတွေ အတွက်ထွက်ပေါက်ရှာကြည့်တာပါ။
တို့ စိတ်အရမ်းညစ်နေတာ ထွက်ပေါက်မဲ့သလိုခံစားနေရတာ တော်တော်ကြာပါပြီ။ တို့ဘာလို့များ ဒီလိုကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ပြောင်းလဲသွားရတာလဲ?
တို့ မင်း ကိုမနာလိုဘူးသိလား ကလေးရေ။
တို့ရဲ့ ဆုံးရှူံးသွားတဲ့ အပြစ်ကင်းစင်မှု လွတ်လပ်မှုတွေအတွက်ပေါ့…
Posted on July 23, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ပေးစာများ(letters)5 Comments on ချစ်ရတဲ့ ကလေးလေးရေ
ချစ်ရတဲ့ အလွမ်းမင်းသမီးရေ… (ကောင်းကင်ပြာ အတွက်ပေးစာ)
ရွာငံမှာ ဒီနှစ်ရဲ့ ချယ်ရီ ပန်းတွေ ကြွေ ကုန်ပြီ မဟုတ်လား?
၁၁ရက် ဧပရယ်လ ၂၀၀၉ ခုနှစ်
Posted on April 10, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ပေးစာများ(letters)7 Comments on ချစ်ရတဲ့ အလွမ်းမင်းသမီးရေ…
Posted on March 20, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ပေးစာများ(letters)11 Comments on ချစ်ရတဲ့ မီးဏီ ရေ….(သဇင်ဏီသို့ ပေးစာ)
ညီညီိတို့က Forrest Gump ဇာတ်လမ်းထဲကလို.. “Run Forrest… Run” ဆိုတာနဲ့
ခြေကုန်သုတ်ပြေးတတ်ဖို့ကို ပတ်ဝန်းကျင်က ပုံစံသွင်းပေးတာ ခံခဲ့ကြရတာ…
အရသာရှိသေးတယ်လို့ တွေးကြည့်ပေါ့.. ကြယ်ရောင်တွေအောက်မှာ ပြေးရင်း လေတိုးတဲ့အရသာကိုခံစားကြည့်လိုက်ကြရအောင်လား.. …
Posted on March 11, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ပေးစာများ(letters)5 Comments on နန်းညီ…ထံမှပြန်စာ….
ဘယ်တော့မှ လမ်းရဲ့အဆုံးကိုရောက်မသွားဘူး ပင်ပန်းမှုတွေနဲ့ ပြန်လှည့်တော့လဲ…
Posted on March 11, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ပေးစာများ(letters)5 Comments on ချစ်ရတဲ့ နန်းညီရေ….
Posted on February 4, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ပေးစာများ(letters)2 Comments on ချစ်ရတဲ့ ယူရီရေ…..